ဖူးနုသစ်: Economist ရဲ့ အယ်လ်ဘမ် (၂)
ဒုတိယပိုင်း ဆက်ပါဦးမယ်။ အပိုင်း ဘယ်လောက်များ မလဲတော့ မသိဘူး။ သူကိုယ်တိုင်ကလည်း ဆက်ရေး ဆက်ရိုက် ဆက်တင်နေဆဲမို့ပါ။
Perhaps the most well known market in Myanmar, BoGyoke Aung San Market (also known as Scott Market) providesaconvenient place for shoppers.
မြန်မာပြည်မှာ အထင်ရှားဆုံး ဈေးလို့ ပြောရမယ် ထင်ပါတယ်။ စကော့ဈေးလို့ သိကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးပါ။ ဈေးဝယ်သူတွေ အတွက် သွားလို့လာလို့ အဆင်ပြေတဲ့နေရာမှာ ရှိပါတယ်။
An inside view of BoGyoke Aung San Market
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဈေးရဲ့ အတွင်းပိုင်း မြင်ကွင်းပါ။
Jewelry section of BoGyoke Aung San Market
Yangon Trader Hotel.
ရန်ကုန် ကုန်သည်ကြီးများ ဟိုတယ်
While other societies in some countries are moving towards cashless societies, thanks to modern banking system pioneered by electronic transactions, we still prefer to use fiat money in large quantity to carry out daily economic transactions. You have to carry this amount of fiat money with you (as shown in the picture) toastore to buy, for instance,arefrigerator oralaptop computer.
တခြားနိုင်ငံတွေမှာ အီလက်ထရွန်နစ် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေက အစပြုပြီး ခေတ်သစ် ဘဏ်စနစ်နဲ့ စက္ကူမဲ့ ပိုက်ဆံသုံးဖို့ လမ်းကြောင်းကို ဦးတည် သွားနေကြပါပြီ။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ စက္ကူပိုက်ဆံတွေ အများကြီးကို သယ်ဆောင်အသုံးပြုပြီး နေ့စဉ် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေကို လုပ်ဖို့ အားသန်နေကြတုန်းပါပဲ။ လက်တော့ပ် ကွန်ပြူတာ တစ်လုံး ဝယ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ် ရေခဲသေတ္တာတစ်လုံး ဝယ်ဖို့အတွက် ပုံမှာ ပြထားသလိုမျိုး ပိုက်ဆံတွေ အများကြီးကို သယ်သွားဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
Please be forewarned that this picture was not taken in New Delhi or Bombay or Karachi or Islamabad; It was taken in Yangon, Myanmar. My Indian friend selling Indian food, one of my most favorite foods, onaroadside.
ဒီပုံက နယူးဒေလီမှာ၊ ဘုံဘေမှာ၊ ဒါမှမဟုတ် ကရာချိတို့ အစ်စလာမာဘတ်တို့မှာ ရိုက်ထားတဲ့ပုံ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့မှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အိန္ဒိယနွယ်ဖွား သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးထဲမှာ ပါတဲ့ ကုလား အစားအစာ တစ်မျိုးကို လမ်းဘေးမှာ ရောင်းနေတာပါ။
Laissez-faire in action: A Sunday morning view ofalocal market.
ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှု ပြုနေကြတဲ့ Laissez-faire ဆိုတာရဲ့ ဥပမာကို တွေ့ရပါမယ်။ ရပ်ကွက်ထဲက ဈေးရဲ့ တနင်္ဂနွေမနက် မြင်ကွင်းပါ။
Dangerous yet happy ride: Those living in industrialized countries and who are loath to taking public transport should get cues from these passengers who risk their lives taking public transport.
အန္တရာယ်များပေမယ့် ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီး စီးကြတာပေါ့။ စက်မှုထွန်းကား ပြီးတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေမှာ အများသုံး သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို မနှစ်မြို့တဲ့သူတွေ အသက်နဲ့ရင်းပြီး သွားလာနေရတဲ့ ဒီခရီးသည်တွေကို မြင်စမ်းစေချင်တယ်။
Emmanuel Church located at the heart of Yangon: another concrete evidence pointing to the religious diversity in Myanmar.
ရန်ကုန်မြို့လယ်ခေါင်မှာ ရှိတဲ့ ဧမာနွေလ ဘုရားကျောင်းပါ။ မြန်မာပြည်မှာ ဘာသာတရား အမျိုးမျိုး အတူတကွ ယှဉ်တွဲပြီး ရှိနေကြတယ် ဆိုတာ အတွက် နောက်ထပ်ပြစရာ ခိုင်မာတဲ့ သက်သေ အထောက်အထား တစ်ခုပါပဲ။
Posted by ZT at 12:53 AM
အပိုင္းေတြ မ်ားလာရင္ေတာ႕သူ႕ကုိ ဘေလာ႕ဖြင္႕ေပးလုိက္ပါေတာ႕။
ၿမန္မာလိုဘဲ ဖတ္ေနမိတယ္ ခက္တာဘဲ အီးလိုညံသထက္ညံ႕လာေနၿပီ. ဟုိေန႕က ေဘာစ္ ဆီ မက္ေဆ႕ပို႕တာ သူက မက္ေစ႕ၿပန္ပို႕တယ္ ေဆာရီးတဲ႕ နင္ေရးထားတာ ငါနားမလည္ဘူးတဲ႕။
သူက ဘေလာ့ခ္ေရးမယ္တဲ့။ ဒါေပမယ့္ အဂၤလိပ္လို ေရးမယ္ ေျပာေနလို႕။ Volunteer ဘာသာျပန္ လုပ္ရေအာင္လည္း အခုေတာင္ သူေရးထားတဲ့ အသံုးအႏွဳန္းေတြ မနည္း လိုက္ျပီး ဘာသာျပန္ေနရတာ။ :D
ဘာရယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ နည်းနည်း nitpicking လုပ်ကြည့်တာပါ။ ကုလားအစားအစာလို့ သုံးမဲ့အစား အိန္ဒိယအစားအစာလို့ ပြောင်းသုံးရင် ပိုြပီးကောင်းမလားလို့။ တစ်ချို့အိန္ဒိယလူမျိုးက အဲဒီလိုခေါ်တာကို မကြိုက်တတ်ဘူးလို့ ြကားဖူးလို့ပါ။